I-Triptorelin Acetate Inaliti / Powder: Ndingayifumana phi? - Phcoker
I-Triptorelin Acetate ikwabizwa ngokuba yi-Triptorelin Acetate140194-24-7 yimolekyuli yeekhemikhali ephilayo enezinto ezininzi ezinokuthabathela indawo ukuya kwiatom yekhabhoni. iatom ekwakhiweni kwemichiza. Ngokusisiseko ngegama elithi 'Organic', into ethethwa yile molekyuli ine-athomu yekhabhoni njenge-atom esembindini. Yonke into enezinto eziphilayo inobukho bekhabhoni kwaye yiyo loo nto ikhabhon isisitshixo sobomi.
I-Triptorelin Acetate isetyenziswa ngokubanzi njengechiza kunye nokwenziwa kwamachiza elebhu. Ukusetyenziswa kwesiyobisi kubaluleke kakhulu kuba kukhetheke kakhulu. I-Triptorelin Acetate ngobunono yiasidi kwaye inomlinganiselo omncinci wokubonelela nge-hydrogen xa kuthelekiswa nenqanaba lokwamkela i-hydrogen. Inefomula yemichiza ye-C66H86NXXUMXO18 kunye nomndilili we-athom ye-molar ye-15 gram nganye. Abarhwebi okanye abathengisi beziyobisi banokusebenzisa la magama njenge-decapeptyl, i-gonapeptyl, njl, okuthetha ukuthi yi-Triptorelin Acetate. I ukusetyenziswa kweTarttorelin Acetate kwihlabathi lanamhlanje libalasele, iyeza lisetyenziselwa ukunyanga umhlaza wedlala lesinyi (Ukubhekisa kumadlala endocrine kwinkqubo yokuzala eyindoda yomzimba womntu). Ayisiyo kuphela umhlaza kodwa isetyenziswe kumanqanaba aphambili olawulo lwehomoni, ulawulo lwe testosterone njl.njl. Ukusetyenziswa kweTriptorelin Acetate okanye iTriptorelin Inaliti, inokuba luncedo kakhulu kwihlabathi lanamhlanje. Umvelisi weTriptorelin Acetate ukwacebisa ukuba kufuneka uthathe uluvo lwakho loogqirha ngaphambi kokuba uthathe amayeza.
ITriptorelin Acetate ikwasetyenziselwa ukunyanga umhlaza wamabele kubafazi. Inye kuphela into ekufuneka iqatshelwe ukuba inaliti yeTriptorelin Acetate ayizukuzisusa iiseli zomhlaza iyodwa, Iyanciphisa ukukhula kwehomoni ukuze iiseli zomhlaza ziyeke ukusasazeka ngaphakathi komzimba womntu, Olu lunyango kuphela ngamanye amaxesha oluneziphumo ezicothayo. Ungalibali ukuthatha uvavanyo lomzimba wakho rhoqo xa usebenzisa amayeza kwaye naluphi na uhlobo lokungaqhelekanga kufuneka uxelwe kugqirha ngaphambi kokuba luqine kwaye luqale ukubonisa iziphumo ebezingalindelekanga ezibi.
Inaliti iqala isenzo sayo ngokuhamba ngemithambo kwaye icima ukukhula okukhuthaza iihormone ezinje nge testosterone njl.Inyathelo layo le-microbiological kwiihomoni nakwizitho ezikhupha iihomoni zisenokungabi yingozi kakhulu kodwa kuyaxhomekeka kumthamo weyeza kunye nokuzikhusela. lomntu. Ngokubanzi, idosi enye ayibonisi siphumo kodwa idosi ethile emiselweyo ngugqirha wakho iya kunceda kummiselo wokukhula.
I-Triptorelin Acetate (140194-24-7) isetyenziswa kunyango lomhlaza (umhlaza webele) kunye nolawulo lokukhula kwamahomoni. Amayeza e-Triptorelin Acetate anikwa ngugqirha wakho njengendlela yesitofu, ngesiqhelo, inaliti iya kuba kanye kuzo zonke iiveki ezi-4 (oku kunokwahluka kwiimeko zempilo kunye nokuzikhusela). Kuya kufuneka ulumke kumthamo ukuphepha naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga. Ukukunceda, ndicebisa ukumakisha umhla wakho kwikhalenda kwaye ngamaxesha athile uthathe inaliti yeTriptorelin Acetate kwixabiso elifanelekileyo ledosi yezona ziphumo zihle. Ukucinywa kwe-Urinary luphawu oluqhelekileyo xa usebenzisa eli chiza. Kule meko, kuya kufuneka ubonane nogqirha wakho kwaye kufuneka niyisebenze kunye le nto kulungelelwaniso lwenu. Ngapha koko, oku kuyakuba kuphela kwiiveki zokuqala. Ukuphazamiseka rhoqo, ukuqaqanjelwa ngamathambo kunokuba zimbalwa ezinye iimpawu kolu setyenziso lweziyobisi kodwa kuya kufuneka uxelele ugqirha ukuba bayaqhubeka nokwanda kwiintlungu. nangona kungekho naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga eziyingozi, Akukho nto iphosakeleyo ngokuba kwicala elikhuselekileyo ngelixa uzama amayeza amatsha. Musa ukoyika kakhulu, iyeza lisebenza kakuhle kuwe kwaye uhlala unenkxaso kugqirha wakho. Ngalo naliphi na ixesha ngexesha lamayeza, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nogqirha wakho malunga nayiphi na imiba yonyango. Ukusetyenziswa kuya kuchazwa yingcali yakho kwaye ndikucebise ngobubele ukuba ungaphazamisi nayiphi na idosi okanye ixesha leyeza.
Ubukhulu becala i-Triptorelin Acetate isetyenziswa ngabantu abanesifo somhlaza wedlala lesinyi okanye imiba yokukhula kwangethuba. Kufuneka bazi ukuba isifo sinokunyangeka xa befika ngexesha kunyango lwabo. Bamele ukuba maxa wambi babonane nogqirha / neengcali zabo ngokubhekisele kwiziphumo ezichaphazela icala okanye iimpawu, Ngamanye amaxesha eyona nto ingakhathalelwanga inokukhula ibe yingxaki enkulu. Ezi zinto kufuneka zikhathalelwe ngaphambi kokusebenzisa naliphi na eli chiza njengeyeza. Isigulana kufuneka sigcine engqondweni ukuba inaliti yeTriptorelin Acetate ayizukuwususa ngokupheleleyo umhlaza ngaxeshanye, Imisa nje iihormoni eziye ziyekise ukukhula kweeseli zomhlaza. Eli yeza aliwuphelisi umhlaza emzimbeni wakho; Iphilisa ngendlela ecothayo nezinzileyo ngokungayivumeli ukuba ikhule. Kuya kufuneka uphinde ufune Uphononongo lweTarttorelin Acetate. Nokuba kukho okhethiweyo, akukho nto iphosakeleyo ekukhangeleni uhlolo lweTarttorelin Acetate kwi-intanethi.
I-Triptorelin Acetate ilungile kuwe ukuba ubandezeleka kwimicimbi yehomoni. ITriptorelin Acetate inokusetyenziswa nangubani na onengxaki ngaphandle kwabafazi abakhulelweyo. Ukongeza, kuya kufuneka uthathe oogqirha bakho uluvo lwakho ukuba bawaqwalasele amayeza njengoko enokwazi malunga nomzimba wakho kakuhle. Nawuphi na umba onxulumene nezonyango kufuneka uxoxwe nogqirha wakho kuqala kwaye ungazithelekisi namanye amayeza afanayo, nobabini ninokuba nokuzikhusela okungafaniyo kunye neendlela zokutya, wonke umntu akafani. Iziphumo zeTriptorelin Acetate kunyango, kwaye ukuba nguwe oyifunayo ke ilungile kuwe. I-Triptorelin Acetate powder okanye iTrelstar, Nokuba oku kunokuba yinto edidayo. I-Triptorelin Acetate powder ngexabiso eliphantsi kunaliti. Kodwa inaliti ibonise iziphumo ezingcono ngokuthelekiswa neTarttorelin Acetate powder.
Ungathenga i-Triptorelin Acetate kwiivenkile zeziyobisi eziqinisekisiweyo kwimigqaliselo. Ungandwendwela naliphi na isebe le Phcoker ukufumana i-Triptorelin Acetate yakho ngexabiso elifikelelekayo. Ngalo lonke ixesha jonga uphawu kunye nomhla wokuphelelwa ngaphambi kokuba uthenge iTriptorelin Acetate.